TCDD Taşımacılık AŞ wuxuu bilaabaa hawlgallo qeybtii hore ee 2016 | RayHaber | raillynews
HomeGUUDTCDD Transportation Inc. waxay bilowdaa hawlgallo qeybtii hore ee 2016
TCDD Transportation Inc. waxay bilowdaa hawlgallo qeybtii hore ee 2016
02 / 11 / 2015 GUUD, HAY'ADAHA, Headline, TURKEY, TCDD
TCDD Tasimacilik AS ayaa bilowday hawlgallada qeybtii kowaad ee 2016: TCDD Tasimacilik AS, oo la abuuray xeer hoosaad ka dhigaysa jidka liberalization ee tareenada, waxaa la qorsheynayaa in la dhiso qeybta hore ee 2016.
Shaqo diyaargarow ah oo lagu dhisayo TCDD Taşımacılık AŞ, kaas oo lagu aasaasay baaxadda xeer-hoosaadka ee xawilaadda jidadka xorta ah ee waddooyinka tareenada, waa socotaa. La talinta dhinaca farsamada ee Midowga Yurub (EU) ee ku saabsan hirgelinta shirkadda ayaa socota, iyadoo shirkadda la qorsheynayo in la dhiso qeybta hore ee 2016.
Iyadoo la tixraacayo sharciyada EU si loo abuuro qaab sharci ah iyo dhismaha ah ee xadiidka ee xnumx't May 1 siiyo Turkey in gaadiidka tareenka sharciga ku saabsan la furfuray ee waddooyinka xadiidka ah ayaa soo galay xilli cusub. Shaqo diyaargarow ah oo loogu talagalay sameynta TCDD Taşımacılık AŞ, oo lagu dhisi doono baaxadda xeerka u degsan waddada loo furayo jidadka tareenada, waa socotaa. Dib-u-habaynta TCDD ayaa sii socota. Qeybta hore ee 2013, kala-tagitaanka TCDD iyo TCDD Taşımacılık AŞ waa la dhammeeyaa. Sidaa daraadeed, gaadiidka xamuulka iyo gawaarida ayaa loo furi doonaa tartanka, ganacsatada gaarka ahi waxay fursad u helayaan in ay raacaan gaadiidka tareenka ee tareenada iyo shaqaalahooda.
Adeegga la-talinta sanadlaha ah ee 2
Studies on diyaargarowga in la sameeyo in sharciga soo socda soo galo Turkey xoog of Law galay on Xorreynta gaadiidka Tareenka ka mid ah furitaanka kaabayaashii habka tareenka oo in ganacsiga gaarka loo leeyahay sii. 2014-2015 adeegga farsamooyinka sanadlaha ah waxaa laga helaa khabiirada EU-da. Sidan oo kale, waxaa loola jeedaa in la hubiyo in loola dhaqmo tartanka siman, bilaashka ah, caddaaladda iyo joogtaynta ah ee qaybta. Ka dib adeegga la-talinta, TCDD Gaadiidka waxaa loo qorsheeyay in la sameeyo sanadka soo socda. Gaadiidka waxaa sameeya shirkad cusub. Tan iyo taariikhdan, qaybta ayaa si buuxda loo xayuubin doonaa shaqooyinka shatiyeysiga ah waxaa loo bilaabi doonaa shirkadaha tareennada ee gaadiidka ganacsiga gaarka loo leeyahay.
5 waxay heli doontaa taageero dawladeed sanado badan
TCDD Transportation Inc., Taageerada dawladda ee 5 way sii socon doontaa. Iyada oo la furfurayo, TCDD Taşımacılık AŞ, oo u baahan doona in uu galo tartan lala yeesho qaybta ganacsiga gaarka ah isla markaana uu qaato waxqabad badan oo ay tahay shirkad saamiley ah, ayaa la filayaa inuu horumariyo siyaasado kala duwan oo ku saabsan mashaariicda cusub iyo canshuuraha.
9 69 million rakaab ah ayaa guuray bil kasta
9 gaadiidka 69 million rakaab ah bishiiba TCDD, kaas oo ka shaqeeya tareenada xamuulka qaada ee gudaha iyo caalamkaba 292 maalin kasta, gaadiidka 2014 million 28 kun tan oo 747 ah. Tan iyo 2002, TCDD waxay kordhisay xaddiga lacageed ee sannadlaha ah iyada oo 97 iyo 326 ay kordhiyeen dakhligooda. Bishii ugu horeysay ee 9 ee sanadkan, TCDD waxay soo qaadday wadarta rakaabka rakaabka 51, oo ay ku jiraan 384 million 69 kun iyo banaanbaxyo. Isla muddadaa, 19 waxa ay qaadatay malaayiin kun oo ton oo xamuul ah.
TCDD Transportation Inc. waxaa la aasaasay qeybta labaad ee sanadka
Hawlgallada garoonka diyaaradaha ee Samsun
Haddii ay jiraan dad isweydiinaya inuu tareenka ka soo gudbayo Bursa, haa waa dhaafeysaa.
TCDD Transport Inc., 1 500 XNUMX Qofka xafladda
TCDD iyo TCDD Taşımacılık AŞ Agaasimaha Guud ee 3. Booqashada Gobolka
RAI iyo TCDD iyo gaadiidka TCDD
Gaadiidka TCDD wuxuu dhaafayaa tariff jiilka ee YHTs
YSE Yapı Sanayi Ticaret AŞ-Tepe İnşaat Sanayi AŞ mashruuca Bursa-Yenişehir YHT…
Gaadiidka koowaad ee gawaarida ee saldhigga SEKA Park-Bus waa la geeyaa 16 September 2016
Gaadiidka TCDD wuxuu diyaar u yahay dhamaadka sanadka
TCDD Tasimacilik AS waxaa lagu dhisaa 2015
Qorshaha Gaadiidka TCDD Inc. Loo dhiibay YPK
Turk-Is iyo Railway-Madaxwayne Atalay booqo TCDD Tasimacilik AS
Agaasimaha Guud ee Gaadiidka TCDD Inc. Kurt ayaa la kulmay hay'ad goboleed ee shirkadda
tareenka xamuulka qaada
Liberalization in Railways
Xorreynta Railway Gaadiidka ee Turkey
Madaxweynaha Ahmet Misbah Demircan, Xoogga Saddexaad wuxuu iga dhigaa mid aad uwanaagsan
Dhismaha Telefoonada Kobanheegan ee Kansarka
Shotka koowaad ee Pickaxe ee Mashruuca Wadada Baaskiil ee Ankara